कामीरिता भन्छन् - '२५ पटक आरोहण गरेर मात्रै विश्राम'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कामीरिता भन्छन् - '२५ पटक आरोहण गरेर मात्रै विश्राम'
कामीरिताको कीर्तिमान, सर्वोच्च शिखरमा २३ औं पटक
जेष्ठ २, २०७६ सुरज कुँवर
काठमाडौँ — सोलुखुम्बुको थामेका ४९ वर्षीय कामीरिता शेर्पाले आफ्नै रेकर्ड तोड्दै बुधबार २३ औं पटक सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । गत वर्ष जेठ २ गते बुधबारकै दिन उनले २२ औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेका थिए ।
‘कामीरिता बुधबार बिहान ७:५० मा सगरमाथा चुचुरामा पुगेका हुन्,’ आधार शिविरबाट सम्पर्क अधिकृत मीरा आचार्यले कान्तिपुरसँग भनिन् । कामीरिता मंगलबार साँझ ८ बजे ८ हजार मिटर उचाइमा रहेको साउथकोलबाट चुचुराका लागि हिँडेका थिए । करिब १२ घण्टापछि उनी बिहान चुचुरामा पाइला राख्न सफल भएका हुन् ।
उनका साथमा निमा वाङदी शेर्पा पनि रहेको सम्पर्क अधिकृत आचार्यले बताइन् । ८८४८ मिटर उचाइको चुचुरोबाट उनी बुधबार दिउँसो ६ हजार २ सय मिटरको दोस्रो शिविरमा ओर्लिसकेको उनी आबद्ध नेपाली कम्पनी सेभेन समिट टे«क्सका अध्यक्ष मिग्मा शेर्पाले बताए । ‘उनी आधार शिविरमा फर्केर फेरि २४ औं पटक आरोहण गर्ने मुडमा छन्,’ अध्यक्ष मिग्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसबारे बिहीबार टुंगो लगाउँछौं ।’
६६ वर्षअघि न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पहिलोपटक आरोहण गरेको सगरमाथामा यस सिजनका लागि मंगलबार दिउँसो मात्रै चुचुरोसम्म डोरी टाँग्दै बाटो बनाइएको थियो । बुधबार कामीरितासहित १४ चिनियाँ र १० नेपाली शेर्पा चुचुरामा पुग्न सफल भएको कम्पनीका अध्यक्ष मिग्माले बताए ।
कामीरितालाई सेभेन समिटले दुई वर्षका लागि वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको छ ।
‘यो रकममध्ये मैले सगरमाथा आरोहणका लागि २० हजार डलर (२२ लाख ५१ हजार हाराहारी) र बाँकी १० हजार (११ लाख २५ हजार रुपैयाँ) मनास्लु हिमाल अरोहण गरेबापत लिन्छु,’ सगरमाथातर्फ लाग्नुअघि कामीरिताले कान्तिपुरसँग भनेका थिए । उनका अनुसार दुई वर्षको समय अबको हिउँदयाममा सकिँदै छ ।
उनी यो कम्पनीमा अनुबन्ध हुनुअघि अमेरिकी कम्पनी अल्पाइन एसेन्टसँग आबद्ध थिए । कामीरितापछी सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण गर्नेमा सोलुखुम्बुकै आप्पा शेर्पा, फुर्वातासी शेर्पा र ङिमा नुरु शेर्पा छन् । उनीहरूले २१ पटक चुचुरामा पाइला राखिसकेका छन् । सन् २०११ मा २१ औं पटकको कीर्तिमानी राखेर आप्पाले आरोहणबाट विश्राम लिइसकेका छन् । उनीपछि २०१३ मा फुर्वातासी आप्पाकै हाराहारीमा पुगेका थिए ।
२४ वर्षको उमेर छँदा २०५१ सालमा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका कामीरिताले २५ पटक आरोहण गरेर मात्रै विश्राम लिने सार्वजनिक गरेका छन् । एक पटक तिब्बततर्फको उत्तरी मोहोडाबाट चुचुरामा पुगेका कामीरिताले २२ पटक नेपालतर्फको दक्षिणी मोहोडाबाट सगरमाथा चुचुरामा पाइला राखेका हुन् । कामीरिता चाबहिल सरस्वतीनगरमा पत्नी, छोरा र छोरीका साथ बस्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०७:४०
जेष्ठ २, २०७६ राजु चाैधरी
काठमाडौँ — समाचार संकलनका क्रममा म मन्त्रालय पुगेको थिएँ । सहसचिव नवराज ढकालसँग भेट्ने योजना थियो । ढकाल बैठकमा व्यस्त भएकाले उपसचिव लवराज जोशीसँग कुराकानी गर्दै थिएँ । त्यही क्रममा मन्त्री मात्रिका यादवका निजी सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको कार्यकक्षबाट भनाभन भइरहेको चर्काे आवाज आयो ।
मिति :२०७६ जेठ १
स्थान:उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
समय:दिउँसो ३ बजे
सहसचिव नवराज ढकाल बैठकमा व्यस्त भएकाले उपसचिव लवराज जोशीसँग कुराकानी गर्दै थिएँ म । त्यही क्रममा मन्त्री मात्रिका यादवका निजी सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यको कार्यकक्षबाट भनाभन भइरहेको चर्काे आवाज आयो । तत्काल त्यहाँ पुगें । केही कर्मचारीले निजी सचिवले घूस खाएर सरुवा गरेको आरोप लगाइरहेका थिए । उनीहरूले उद्योग विभागमा सरुवा गर्नुपर्नेको नाम काटेको आरोप लगाए । आधिकारिक ट्रेड युनियनका शोभाकार रेग्मी र विश्वबन्धु रेग्मीले घूस खाएरै उद्योग विभागमा सरुवा नगरिएको आरोप लगाइरहेका बेला अरू कर्मचारी पनि टेबल ठोकेर चर्को स्वर गरिरहेका थिए । यत्तिकैमा मन्त्री यादव जंगिँदै बाहिर निस्के ।
मन्त्री यादव : किन बबाल गरेको ? झगडा गर्ने को हो ?
कर्मचारी : हैन मन्त्रीज्यू, बबाल गरेकँ होइनौं हामीले ।
मन्त्री : यहाँ नेतागिरी गर्ने होइन । कर्मचारी हो भने कर्मचारीजस्तै काम गर्ने ।
स्वकीय सचिव सन्तोष बिष्ट : उहाँले (आचार्यतिर देखाउँदै) पैसा खाएको के प्रमाण छ ? भन्नू त ।
मन्त्री : पैसा खाएको भए प्रमाण जुटाउनुस् अहिल्यै । ढोका बन्द गरिहाल्नु त । प्रमाण ल्याएपछि मात्रै ढोका खोल्नू, नभए यहीं थुन्नू ।
(बाहिर निस्कन खोजेका कर्मचारीलाई मन्त्रीले कठालोमा समातेर भित्र ताने ।)
कर्मचारी : किन ढोका बन्द गर्ने हामीलाई ?
(कोठाभित्र चर्काचर्की/होहल्ला झनै बढ्यो । ‘ठोक/ठोक’ भन्ने आवाज सुनियो ।)
मन्त्री : हात हाल्ने ? मेरो कर्मचारीमाथि हात हाल्ने ?
कर्मचारी : मन्त्रीज्यू । उहाँले हात हाल्नुभएको छैन, हामी हजुरसँग कुरा गर्न पछि आउँछौं (बाहिर निस्कन खोज्दै) ।
कोठाबाट आवाज आउँछ : नराम्रो काम गरेबापत हटाएको कर्मचारीलाई उद्योग विभागमा लगियो । गृहले घूस खायो भनेर हटाइएको मान्छेलाई त्यहाँ उच्च मूल्यांकन गरेर पठाइयो ।
(अर्का पीए यज्ञ खरेलले मन्त्रीलाई कार्यकक्षमा जान भने)
मन्त्री : तिमी बीचमा किन ? तिम्लाई पिटम् ?
फेरि मन्त्रीको स्वर : यो मन्त्रालयमा कसले घूस खाएको छ ? प्रमाण नभएसम्म थुन्छु । नेतागिरी गर्ने हो भने ठीक ठाउँमा (राजनीतिमै) आउनुपर्‍यो ।
(ढोका बन्द गर्ने/खोल्ने क्रम भई नै रहेको थियो । मन्त्री यादवले फेरि ढोका बन्द गर्न भनेसँगै कर्मचारीहरू प्रमाण ल्याउँछौं भन्दै भागाभाग गरे ।)
निजी सचिव आचार्यले तलबाट प्रस्ताव आए पनि निजी सचिवले नाम काटेको आरोप लगाइएको तर्क गरे । ‘सरुवाबारे असन्तुष्ट भएको सुनेका थिएँ, नाम काट्नु भयो भनेर आरोप लगाए,’ उनले भने, ‘सरुवा हुन नदिएको, नाम काटेको आरोपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका साथीहरू चर्काचर्की गरे ।’
मन्त्रालयका अनुसार दुवै कर्मचारी मन्त्रालयकै हुन् । हाल ती कर्मचारीलाई वाणिज्य विभागमा सरुवा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरूले सुरुमा उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडासँग भेटेका थिए । खतिवडाले आफ्नो कुनै हात नभएको बताएपछि मन्त्रीसँग भेट्न चाहेका थिए । मन्त्रीसँग पनि भेट हुन नसकेपछि निजी सचिव आचार्यसँग विवाद भएको हो । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखा उपसचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएकालाई रिक्त रहेको स्थानमा खटाएको बताए ।
मन्त्री यादवले कांग्रेसका कर्मचारीहरू उद्योग विभागमा जान खोजेको र पदस्थापना नपर्दा विरोध गरेको बताए । ‘निजी सचिवलाई धम्काउने, टेबल ठटाउने, कालोमोसो दल्छु भन्ने गरेका थिए,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘म गएर तपाईंहरू बबाल नमच्चाउनुस्, घूस खाएका छन् भने प्रमाण ल्याउनुस्, यहाँ नेतागिरी गर्ने होइन, प्रमाण ल्याए कारबाही गर्छु तर प्रमाण चाहिन्छ भनें । त्यसपश्चात् उनीहरू हिँडे ।’
उनले ती कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । ‘कर्मचारी संगठनमा भएकाहरू मन्त्रालयमा आएर दादागिरी गर्ने काम भइरहेको छ, त्यो मेरो मन्त्रालयमा चल्दैन,’ उनले भने, ‘जुनसुकै पक्ष होस् काम गर्नुपर्छ ।’
गृह मन्त्रालयबाट हटाइएका उपसचिव विनोद खड्कालाई उद्योग मन्त्रालयले आर्थिक चलखेल गरी उद्योग विभागमा पदस्थापन गरेको, शाखा अधिकृत आर्जन राईलाई अध्ययन बिदा सकेको वर्ष दिन नपुग्दै उद्योग विभागमा सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०७:३७